Warshadda Boorashka Waraaqaha Waraaqaha - Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha Waraaqaha Cawska
Waraaqda Dabiiciga ah ee Straw Bag Eco-friendly Qurxinta Qabanqaabiyaha Funaanadda Samee Bag
Qaabku sidaa uma weyna oo way fududahay in la qaado oo la kaydiyo, marka laga reebo, waa qurux badan tahay waana u gaar unisex in la isticmaalo. Bacdu waa wax la mid ah tan jidhka. Bacda oo dhami waa dabiici waxayna buuxisaa aquirements-ka “deegaanka u fiican”.
Waraaqda Cadka Xaashida Eco-saaxiibtinimo Midabka Dabiiciga ah Samee Qabanqaabiyaha Qurxinta
Khadadka maaddadu waa toosan yihiin waana hagaagsan yihiin, waxaad dareemi kartaa tayada maaddada aan door bidnay inay tahay mid sarreysa oo lagu kalsoonaan karo, sidoo kale, cawska xaashidu ma aha oo kaliya mid dabiici ah oo dib loo cusboonaysiin karo laakiin ma leh ur gaar ah. - qalabka saaxiibtinimada leh ayaa loo adeegsaday noocyo kala duwan.
Boorsada isku-qurxinta Eco-saaxiibtinimada leh ee Isku-xidhka Boorsada leh Tassel Puller
Qaabku sidaa uma weyna oo way fududahay in la qaado oo la kaydiyo, marka laga reebo, waa qurux badan tahay waana u gaar unisex in la isticmaalo. Bacda oo dhami waa dabiici waxayna buuxisaa shuruudaha "bey'adda u fiican". Boorsadani waa qaab T-qaab ah oo joogto ah.